Olee otú Iji Lelee 90 Day Fiancé: Tupu ụbọchị 90 dị n'ịntanetị na n'efu - Online Comparison】
Dị ka azụ si na mmiri
Etu esi lelee ụbọchị 90 Fiancé: Tupu ụbọchị 90 dị n'ịntanetị na n'efu
Na-eche ndị ị hụrụ n'anya n'akụkụ nke ọzọ omenala na mbata na ọpụpụ? Ọ bụghị echiche onye ọ bụla inwe oge, mana ọ bụ ihe ọ bụla ma e jiri ya tụnyere ichere akwụkwọ visa na alụmdi na nwunye gị. Ihe omuma a bu ihe ngosi 90 Day Fiancé. Mana ọbụlagodi tupu di na nwunye amata ụdị nke K-1, ha ga-akparịrị mmalite nke mmekọrịta ha. Anyị na-egosi gị otu esi ekiri ụbọchị 90 Fiancé: Tupu ụbọchị 90 na ntanetị wee gụchaa ihe omume Prequel na-esote ebe ọ bụla.
90 Day Fiancé - tupu ụbọchị 90 eji Aghọ Aghụghọ Ule
Ihe ọhụụ na - eduga na ụbọchị 90 ikuku na TLC na US na 8pm ET / 7pm CST na abalị Sọnde, nke pụtara na ị nwere ike ịlele elele ụbọchị 90 na Fiancé n'efu. Dị ka akụkụ nke azụmahịa Sling's Happy Hour.
Usoro kachasị ọhụrụ nke 90 Day Fiancé: Tupu 90 Days enye ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị agbawa agbawa ruo taa, gụnyere ọgụ dị egwu n'etiti 'Big Ed' Brown na nwunye ya n'ọdịnihu, Rosemarie 'Rose' Vega.
N’ebe ndị ọzọ, anyị ahụpere mbido David na Lana, Avery na Ash, na ngosipụta mbedo nke Darcey na Tom, ndị a niile bụcha ọmarịcha ihe nkiri na ndụ dị ụtọ.
Enwere ihe kpatara ihe ngosi a ji bụrụ ihe ga - enwerịrị maka ndị na - akwado eziokwu TV n’eziokwu gburugburu ụwa, yabụ ka anyị kwụsị kwụ n’ahịrị, nke a bụ ihe 90 Day Fiancé: Tupu ụbọchị 90 dị ka ntanetị na n’efu.
Etu esi lelee 90bọchị XNUMX Fiance Online na USA n'efu
Dị ka anyị kwuru, 90 Day Fiancé na-akwado TLC na United States, na ọhụụ ọhụrụ nke Beyond 90 Days ikuku kwa Sunday ọ bụla na 8pm ET / PT ma ọ bụ 7pm CT.
Ọ bụrụ na ịnwetaghị TLC na eriri USB gị, ị nwere ike ị gaghị enuba ya site na weebụsaịtị TLC, mana echegbula onwe gị, ndị na-egwu TV eziokwu, ị nwere nhọrọ.
Onye kachasị mma n’ime ha bụ Sling TV. Ndi Dish Network satịlaịtị na-eweta ya, ọ bụ ọrụ nkwanye egwu a pụrụ ịdabere na ya nke na-enye gị ohere ịnweta ọwa 50, ihe karịrị ihe nkiri 50,000 na ihe ngosi TV na-achọ, yana ikike ịlele ihu atọ n'otu oge, tinyere DVR ojii nchekwa niile ndekọ na ị chọrọ ime.
Nke kachasị, ha na-agba ọsọ ugbu a ọ specialụ Oge Obi Happytọ pụrụ iche nke na-enye gị ohere ilele ọdịnaya ahọpụtara n'efu n'efu n'etiti elekere 5 na etiti abalị ET na United States, na-ekpuchi ọhụụ ọhụụ nke 90 Day Fiancé: Tupu ụbọchị 90.
Ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị a dị mma mana ịnweghị ike ịnweta ha n'ihi mgbochi mgbochi geo-jidere, jidere VPN dị ka akọwara n'elu wee gụgharịa ngosipụta dị ka ị ga-eme.
Esi lelee ụbọchị 90 Fiancé: Tupu ụbọchị 90 n'ịntanetị na Canada
Ozi ọma ahụ bụ na 90 Day Fiancé na-agbasa na TLC na Canada n'otu oge ọ na-ebupụta na United States, ya mere na 8pm ET n'abalị Sunday.
Nke a pụtara Tupu ụbọchị 90 enwere ike ịgbanye site na ngwa TLC, nke dị maka ọtụtụ ngwaọrụ, gụnyere gam akporo, iOS, Roku, Amazon Fire TV, Xbox, na ụfọdụ Samsung smart TVs.
Onye ọ bụla nọ na Canada na-ahọrọ ikiri iji ọrụ dị iche chọrọ naanị VPN ka ọ kwaga n'obodo ya.
Otu esi ahụ enyi nwoke nke 90 ụbọchị: tupu ụbọchị 90 na mpụga obodo gị
Onye ọ bụla chọrọ ile 90 Fiancé anya: Tupu ụbọchị 90 ga - achọpụta na ọ na - agbasa ozi ugbu a na United States na Canada - ọchụnta ọjọọ maka ahịa dị ka UK na Australia.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị si North America ma chọọ ijikọ na Fiancé 90 jours dị ka ị ga-eme n'ụlọ, enwere ụzọ dị mfe: ihe niile ị chọrọ bụ ezigbo VPN ma ị nwere ike ịlele Fiancé 90 ụbọchị - tupu ụbọchị 90 na-ebi na Sọnde ọ bụla a na-agbasa ya ma ọ bụ mgbe ọ gachara. Ma olee nke ịhọrọ?
p class = »vanilla-oyiyi-ngọngọ»>
E nwere ọtụtụ narị VPN, ọ bụ ezie na anyị na-akwado ExpressVPN. Ntinye ya dị ngwa, dị mfe ma kwụ ọtọ. Ọ dakọtara na ọtụtụ ngwaọrụ, gụnyere Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS na gam akporo.
ExpressVPN ụbọchị 30 na-agbanwe ego ịkwụ ụgwọ na-esi ike ịrụ ụka. Ọbụna nke ka mma, ịnwere ike ịzụta atụmatụ kwa afọ na ntinye ego 49% na mgbakwunye ọnwa 3 ọzọ - nnukwu ego na ngwanrọ dị mkpa.
Ozugbo awụnyere ya, họrọ ọnọdụ obodo gị wee pịa njikọ. Mgbe ahụ ị nwere ike ilele ụbọchị 90 nke onye chọrọ ịlụ - gafere ụbọchị 90 n'ịntanetị ebe ọ bụla ị nọ, ma mepee ọtụtụ nhọrọ nlele n'efu?
Ihe niile: # 1 kacha mma VPN
Balance nke nhọrọ na ịdị mfe nke iji